विवाहको सरलीकरण | Hamro Patro
हुन त सुन, चाँदी अनि गरगहनालाई सम्पत्तिका रुपमा पनि लिइन्छ, लगानीका रुपमा तर भविष्यमा यी कुराले लगानीका रुपमा जे जत्ति कार्य गरेपनि वर्तमानमा विवाहका आयोजक पक्षलाई बोझ त हो नै । दाईजो प्रथाबाट माथि उठ्दै आएको नेपाली समाजमा विवाहलाई यसरी व्यवसायिकरणको लेप नलगाइयोस् ।
गत महिना जब समीर र सन्तोषीको विवाह भयो, तब उनीहरुले निधो गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु थिए । विवाह कहाँ गर्ने ठाँउ छान्नपर्ने थियो, हुन त न समीर न सन्तोषी दुवै धार्मिक त हैनन् तथापि विवाहमा हुने धार्मिक रित अनि तिनका विभिन्न पाटाहरुका चाँजोपाँजो पनि उनीहरुले नै मिलाउनुपर्ने थियो ।
अझ विशेष कुरा त के थियो भनें, विवाह पछिको भोज अर्थात पार्टी । अहिले नेपाली समाजमा मात्र नभईकन विश्वव्यापी रुपमै विवाह भोज अनि पार्टीले एउटा उपभोक्तासीपको हुरी नै ल्याएको छ ।
फलानाको विवाहमा यस्तो पार्टी, बेहुला बेहुलीको डिजायनर्स लुगा, महँगा ड्रिकंस, पार्टी प्यालेश लगायत थुप्रै अन्य कुराहरु । साथीको विवाहमा गएको पैँचो आफ्नो विवाहमा तिर्ने अनि विवाहलाई पैंचो तिर्ने अनि भोज र भत्तेरसंग मात्र दाँज्ने एउटा रवाफीलो चलन आएको छ, हैन र ?
समीर र सन्तोषीले एक अर्कालाई दुई वर्ष अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटेका हुन् र पछि गएर काम विशेषले विदेश जादाँ सगैं उनीहरुको प्रेम झनै झँगिएको हो । पार्टी सभ्यतामा विवाहपछि धेरैजसो छोरा पक्षलाई आयोजक मानिन्छ, समीर अहिले विवाह पछि पार्टी भन्दा भविष्यको लागि पैसो जोगाउन चाहन्छ ।
हुन त न्यूयोर्क टाइम्सले आफ्नो फेब्रुअरीको संस्मरणमा सन् २०१८ मा लेखेको छ कि विदेशमा पनि अहिले आएर विवाहको पार्टी संस्कार अत्यन्त घट्दै आएको छ भनेर । न्यूयोर्क टाइम्स थप्दछ– पार्टी कल्चर विवाहका लागि एउटा सम्मान भन्दा पनि झन्झट हुन थालेको छ ।
तर हाम्रो विश्वमा भने त्यस्तो छैन, पार्टी कल्चर सभ्यताको चरममा छ । विवाह पछिको भोज अर्थात पार्टीमा जाने अविवाहीतहरु आफ्नो विवाहमा पैंचो तिर्ने सोचमा हुन्छन् अनि अभिभावकहरु आफ्नो सन्तानको विवाहमा पैंचो तिर्ने सोचमा हुन्छन् । अझ फिल्मी दुनिँयाले झन रौस थपेको छ, विवाहलाई एक्सक्लुसीभ्ली देखाएको पर्दाले सबैको मष्तिष्कमा विवाहलाई उपभोत्ताशीपको आधारभूत अपेक्षामात्र बनाएको छ । विवाह भनेको त सामान्य रुपमा दुईजनाको आपसको समझदारीमा तय गरिने सामाजिक बन्धन हो जसलाई केवल उपभोक्ताशीपको लेप लगाएर संस्कार अनि सभ्यता नै भाँड्नु चाँही गलत हो । के ठूलो पार्टी प्यालेसमा भएको अनि ठूला ठूला क्यामेरामा कैद गरिएका रंगिन विवाहहरु मात्र जिवनपर्यन्त भाराकान्तसम्म सुमधुर रहिरहन्छन् त ? विवाहलाई क्रय अनि विक्रयको धरातलबाट माथि उठाएर अब सहज अनि सरल प्रक्रियाका रुपमा बुझाउन र बुझ्न जरुरी छैन र ? यसरी विवाहलाई व्यवसायिक बनाँउदा मान्छेहरुलाई विवाह एउटा जीवनको सहज पाटो भन्दा पनि जोखिमका रुपमा लाग्न थाल्दैन र ?
न्यूयोर्क टाइम्समा समाजशास्त्रकी प्राध्यापक डाक्ट एन्जीला एल थम्पसन लेख्दछिन्– सामान्यतया अमेरीकि विवाहहरुमा न्यूनतम खर्च १२०० देखि १८०० डलर सम्म हुन्छ । यो मुल्य नेपाली रुपैयाँमा करिब १ लाख देखि २ लाख सम्म हुन्छ । विकसित देशको औसत विवाह मुल्यलाई नेपाली विवाहको औसत मुल्यसंग तुलना गर्दा यसको दुईगुणा त जत्तिकै कम गरेपनि सामान्य खर्च लाग्ने देखिन्छ । सिन्दुर पोते बाहेकका हामीले थप्दै गएका सुन, चाँदी, भेटी, जन्ती पर्सने अनि भोज लगायतका खर्चमा हामीले सामान्य भन्दा सामान्य विवाहमा लाखौं खर्च गर्ने गर्दछौं । अब तुलना गरौं अमेरिका र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय, जुन आकाश र पाताल जत्तिकै छ ।
हुन त सुन, चाँदी अनि गरगहनालाई सम्पत्तिका रुपमा पनि लिइन्छ, लगानीका रुपमा तर भविष्यमा यी कुराले लगानीका रुपमा जे जत्ति कार्य गरेपनि वर्तमानमा विवाहका आयोजक पक्षलाई बोझ त हो नै ।
दाईजो प्रथाबाट माथि उठ्दै आएको नेपाली समाजमा विवाहलाई यसरी व्यवसायिकरणको लेप नलगाइयोस् । विवाह सरल होस् अनि सामान्य, समाजको अर्थपूर्ण सहभागिता अनि वरवधुको लागि आशिर्वाद विवाहको कडी हो । सक्नेले शहरलाई नै बोलाएर भोज गर्नु नराम्रो हैन, रहर सबैको हुन्छ । सुन भन्दा पनि सुन जस्तै समबन्ध अनि विश्वासको वरवधुबिच भावना कायम होस् भन्ने आर्शिवाद जरुरी छ । विवाहपछिका दिनहरु पनि विवाह समारोहले सहज बनाउन सक्नुपर्दछ । विवाह आर्थिक भार या बोझ नहोस् । यस कुराहरुमा कर्मकाण्ड निर्धारक देखि समाजका हरेक अवयवहरु सचेत रहन जरुरी छ ।
सामान्य विवाहले असामान्य माया बढोस् न, हैन र ?